I-EU Ipha iZimbabwe Izigidi Ezilitshumi Lantathu Zamadollar Yenhlelo Zempilakahle
Abenhlanganiso yeEuropean Union baphe eleZimbabwe usizo lwezigidi ezilitshumi lantathu zamadolla-US$13million, yokuqhuba inhlelo zokuvuselela uhlangothi lwezempilakahle phansi kwesikhwama seHealth Transition Fund.
Ummeli we Unicef eZimbabwe, umnumzana Reza Hossaini utshele abakade besemkhosini wokulotshwa kwesivumelwano sokupha lolu ncedo owenzelwe amahofisini eUnicef lamuhla ekuseni, ukuba lokhu kuza ngesikhathi uhlelo lwe Health Transition Fund lugqitshwa ekupheleni kwawonalo umnyaka.
Lanxa isimo sezempilakahle sesinganeno lokhu loluhlelo lwasungulwayo ngo2011, usesekhona umsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle elizweni.
Okuyinto esekelwe ngummeli wenhlanganiso ye European Union eZimbabwe, umnumzana Philipe Van Damme, okhuthaze uhulumende ukuba aqakathekise ezempilakahle hatshi ukuthembela usizo oluvela phandle kwelizwe.
Umphathintambo wezempilakahle u Dr David Parirenyatwa uthi kuqhakathekile ukuthi sengezwe ilisinganiso semali eyabelwa ugatsha lwakhe sisuka kwelisitshiyagalombili okwamanje siye kutshumi lanhlanu ekhulwini-8% - 15 % ).